Sidee loo aasayaa qofkii udhinta Covid-19? – Banaadir Times
By banaadir 31st March 2020 114
In kasta oo ummad walba dhaqan u gaara ah oo aaska la xiriira ay leeyihiin, ayaa haddana waxaa xaqiiqo ah in ay intii isku diin ahba ay jiraan wax badan oo ay wadaagaan oo diintoodu dhigaysa.
Waa hab ay diintu ku xurmayso aadanaha oo la faray Muslimiinta in qofka ka dhinta waajib ka saaranyahay oo ay tahay in ay u sagootiyaan sida ay shareecadu dhigtay.
Uma baahna faahfaahin dheeeraad ah oo akhriste qudhaaduba waad fahmeysaa, waxaynu ka hadlaynaa waxa uu yahay ee ah maydhid, kafan iyo salaadda jinaasada ah ee waajibka ah.
Su’aashuse waxay tahay, qofka Muslim ka ah ee u dhinta cudurkan Covid-19, sidee ugu haboon ee loo aasi karaa? Haddii aanay suurto gali karin sidii shareecadu jidaysay maxaa laga yeelayaa?
Su’aalahan waa kuwo ay Muslimiinta dunida oo dhami maalmahan ba is weydiinayeen. Weliba, in laga jaahil saaro waxaa aad ugu hanqal taagayey Muslimiinta ku dhaqan dalalka ay ku yaryihiin ee aqlabiyaddoodu tahay dadka diimaha kale haysta, sida wadamada reer Galbeedka oo kale.
Jawaabaha ay ka bixiyeen culimada diinta ee Muslimiintu ayaa gabigooduba isku mid ah oo aan waxba ku kala duwayn.
Al-Azhar Al-Shareef oo ah xarrun weyn oo Muslimiintu aad u tix geliyaan kana mid ah xarumaha diinta Islaamka ee ugu faca weyn ayaa Fatwo ay soo saartay ku faahfaahisay sida ugu haboon ee ay tahay in loo aaso qofka u dhinta cudurkan halista ah ee fayraska Covid-19.
“Asalku waxa weeyi in qofka Muslimka ah ee dhinta la maydho maydkiisa, kafan lagu xidho oo lagu tukado salaadda jinaasada, haddii se qofku u dhinto cudur faafa oo la kala qaado oo ay khubarada caafimaadku xaqiijiyaan in maydkaa maydhiddiisa laga qaadi karo cudurka uu u dhintay, marka waajibkaasi meesha wuu ka baxayaa oo sida ay khubarada caafimaadku ku taliyeen ayaa la raacayaan oo kafankii iyo maydhiddiiba waajib noqon maayaan,” Ayey tidhi Fatwadu.
Jawaabtan oo kale waxa isna bixiyey oo ka hadlay sida loo assayo qofka u dhinta cudurkan halista ah, Sheekh Maxamed Cabdi Umal, oo ka mid ah culimada Soomaalida.
Wuxuu sheekhu sheegay in waajibaadkaa ay shareecadu jidaysay ee ah maydhidda, kafan ku xiridda iyo salaadda jinaasadu “ay meesha ka baxayaan oo ay diintu ruqsadaa bixinayso” haddii Muslimiinta nool ee aasi lahayd qofkaa dhintay ay naftoodu halis ku galayso arimahaas, sida ay xaqiijiyeen khubarada caafimaadku ee ah in xataa maydka laga qaadi karo cudurkan Covid-19 haddii dadku taabtaan.
Sheekhu wuxuu aad u faahfaahiyey arrintan, isagoo dadka u sharaxay hadba sida ay diintu u eegto maslaxada dadka nool ee Muslimiinta ah.
“Sababtu waxaa weeyi in badan oo axkaamta shareecada iyo waajibaadka iyo faraa’idda diinta ka mid ah, waxay u dhacaan oo ay meesha uga baxaan markii uu ka dhalanayo samayntooda darar iyo dhib ka weyn,” ayuu yidhi sheekh Umal.